Caruurta Qaliinka ku dhasha oo la kulma Dhibaato dhanka Maskaxda [Daraasad]
Curuurta ay dhalaan Hooyooyinka da’doodu ka sareyso 35-sano ama lagu dhaliyo Qaliinka waxay halis ugu jiraan dhibaatooyinka dhanka maskaxda ah ama inay noqdaan kuwa uusan Lixaad-koodu dhameystirneyn, sida lagu sheegay Daraasad cusub.
Cilmi-baarista oo laga sameeyay dalka Kenya ayaa sidoo kale waxaa lagu ogaaday inuu jiro sare u kac carruurta curyaanimada ilmaha ku dhashay qaliinka.
Baaritaanka ayaa waxaa lagu soo helay in 97 caruur oo uusan dhameen Lixaad-kooda ay ku dhasheen markii Hooyin-kooda qaliin lagu sameeyay, taasoo ka badan inta kale ee Hooyooyinka ku dhalaan sida caadiga ah.
“Waa jirta saami ka badan curuurta lixaadkooda dhameen oo ah marka ay soo Koriso Hal Hooyo taasoo ka badan kuwa ay soo Koriyeen labada waalid,” ayey tiri Darasadaan oo lagu daabacay Joornaalka Cilmi-baarista Naasnuujinta Caalamiga ah.
Daraasadaan oo la sameeyay intii u dhaxeysay Maarso iyo June ee sanadkii hore ayaa sidoo kale tilmaamaysa in tirada Haweenka ee da'doodu ay tahay mid udub dhaxaad u ah arinkan, iyadoo Gabdhuhu yihiin kuwa ka badan Raga.
Tani macnaheedu waxay tahay in curuurta ku dhalatay Qaliinka iyagoo Lixaadkoodu uusan dhamayn ay 62% yihiin Wiilal, taasoo ka sarey-siinaysa Gabdhaha.
Daraasada oo uu hogaaminayey Mathieu Nemerimana, ayaa lagu baaray sababaha aan hiddeside ahayn ee u horseedi kara dib u dhaca dhanka maskaxda ah oo carruurta ku timaada.
Kooxda Cilmi-baarista sameysay ayaa, si kastaba waxay daboolka ka qaadeen in natiijooyinka baaritaankooda aysan aheyn mid la isku halleyn karo islamarkaana u baahan baaritaan dheeraad ah, si loo xaqiijiyo.
Dhakhaatiir u dhashay dalka Cuba oo lagu qafaashay dalka Kenya
Afrika 12.04.2019. 14:33
Maamulka halka lagu qafaashay howlwadeenadaan caafimaad ayaa warbixiyay falka.
Walwal lasoo darsay Xildhibaan ay gurigiisa u dhaceen dabley
Afrika 31.03.2019. 06:15
Qareen "si aan ola kac ahayn" u dilay wiilkiisa oo la xiray
Afrika 18.03.2019. 05:48
Farmaajo iyo Abiy Axmed oo ku wajahan Kenya xili khilaaf uu jiro
Soomaliya 05.03.2019. 18:58
Xeelada ay A-Shabaab u adeegsatay weerarka Hotel Dusit D2 ee Nairobi
Afrika 16.01.2019. 12:18